Quadriplegics uye kushandiswa kweGoogle Kumba | Karman® Mawiricheya
Quadriplegics uye kushandiswa kweGoogle Imba
Posted on January 8, 2018 November 20, 2020 by csr 1687
Imba yeGoogle yeQuadriplegics
Kana usati wambonzwa nezve google kumba saka urikushaya. Imba yeGoogle zvinogona kuva a remara shamwari yepamwoyo munhu chaizvo. Iwe chaizvo unogona kuita hurukuro yekutanga nechinhu icho. Unogona kuzvibvunza zvinhu zvakawanda kubva pawebhu izvo zvaunowanzo tsvaga pa google. Kana iwe uine dambudziko renguva pfupi yekurangarira saka chiudze icho kuti chiise chiyeuchidzo. Sezvo Google yaburitsa chigadziriso kwaunogona kumaka nzvimbo dziri wiricheya zvine hushamwari zvichave nyore kwazvo kuwana ruzivo pane izvo. Inoshandisa kuve mutambo wekutsvaga wakanakisa gwara renzvimbo iwe raunogona kuwana.
Kune izvo zviri nyore maficha sekuwana kugadzirisa mamiriro ekunze kana kuwana imwe yemuno nhau. Vari kuenda kunoshandisa chimwe chinhu munguva pfupi kwaunogona kuudza chishandiso husiku hwakanaka uye ichadzima mwenje pamwe nekubatidza alarm yako yehusiku kumba kwako. Chinhu chinotonhorera chairi parizvino ndechekuti iwe unogona
nyatso kutepfenyura meseji pairi uye wobva wawedzera vamwe vatauri kwairi kuti uwedzere meseji. Iwe unongozvibatanidza neako Android foni kushandisa chirongwa chakakosha uye unogona kuchiisa mumba yekutandarira nekutepfenyura meseji kunhengo dzemhuri yako kana iwe uchida chimwe chinhu. Chimwe chinhu chinotonhorera icho chingakurumidza kubuda pane ramangwana kugadzirisa ndeye kugona kuti uzvitumire iwe ruzivo rwawakangobvunza iwe kuGoogle kumba kwako. Iyo ficha yekuti munhu wese asina kurongeka achada foni yekuwana foni. Unogona kuiudza kuti iwane foni yako uye icharira asi yeApple, kana foni yako iri pane yakanyarara icharamba ichirira asi kwete yechinhu cheIOS.
Izvo zvakare zvinokwanisa kuvaraidza vana nemitambo yazvino yakaita sekurova bhendi, zvigaro zvemimhanzi, mitambo yetrivhi, nezvimwe. Inogona kuziva izwi revana zvakare. Kana iwe uine
Chromecasts yakabatana neako TV ipapo unogona zvakare kudzima terevhizheni uye kudzima kuti usazosimuke pamubhedha upinde yako wiricheya kungo batidza iyo TV kana iwe usina kure.
Unogona kufona kushandisa inova inotonhorera kana usingawani foni yako. Paunofona kushandisa chishandiso chainorira kune rimwe divi seyako nhamba uye kwete yechinyakare sezvayakaita isati yagadziriswa iyo yakaibata. Izvi zvinogona kuuya zvinobatsira mukati
mamiriro ekukurumidzira pamwe nemamiriro ezvinhu anofinha. Pamwe iwe unongoda kuyeuchidza shamwari yako kuti iuye neimwe Chips vasati vasvika pamba pako sezvo iwe usingakwanise kutsvaga foni yako kana iri imwe nzvimbo yausingakwanise kusvika.
Kushamwaridzana nemunhu anoshandisa wiricheya
Maapuro Nyowani Wiricheya App